Indraindray heveriko fa voanjo aho manomboka ny orinasako manokana 2 taona lasa izay (saingy tsy hanana izany amin'ny fomba hafa aho). Fotoana fohy taorian'ny nanombohako ny orinasa dia fantatro fa sahirana aho satria nanana vokatra tsara nefa tsy nanana ny fomba hivarotana azy. Nametraka teny nindramina aho tamin'ny fanombanana ny fotoana handinihako ahy ary avy eo hampitomboako izany amin'ny isam-bolana. Ny vokany dia ny hahalasa ahy inefatra ny zava-drehetra ary hanao izay kely noho izay tokony hataoko amin'ny takelaka fisakafoanana aho… ary tsy hatory.
Io fiovana tamin'ny fomba nataoko io dia nampiakatra ny asako. Mbola manana mpanjifa kely maro aho, saingy efa nanaloka ireo mpanjifa lehibe izany manome lanja bebe kokoa ny serivisiko noho ny fiatraikany farany eo amin'ny fikambanan'izy ireo. Ny mahatsikaiky dia ny fifanarahana kely ananantsika ankehitriny no tena sarotra indrindra satria ny fiakarana 10% amin'ny fiverenana dia mety tsy manarona ny fifandraisantsika isam-bolana akory!
Raha ianao 99 famolavolana, mety io. Tsy mifaninana amin'ny tolotra hafa mora vidy ihany ianao. Saingy ho moana fotsiny ny sasany amin'ireo mpiara-miasa amiko mpamolavola sary hanonona izay vidin'ny logo raha tsy azony ny lanjan'ilay logo mety ho entin'ny orinasa. Misy logo vaovao voafaritra orinasa! Ny sary famantarana mora vidy dia azo heverina ho mora vidy - miaraka amin'ny orinasa anisany. Ny sary famantarana kalitao dia afaka manova izany fomba fijery izany ary manangona fifantohana bebe kokoa amin'ny indostria.
Ny varotrao dia fampisehoana ivelany ny fahitana ianao manana ny marikao. Raha ampahany amin'ny sanda ny vidiny, azo antoka, ampio "mora" amin'ny anaran'ny marika ary atsipazo ny vidin'ny fifaninanana etsy ambony! Na izany aza, raha ny soatoavina entinao dia ny traikefa, ny faharanitan-tsaina, ny firehan-kevitra, ny fahasarotana ary ny valiny… tazomy tsy ho eo amin'ilay tranonkala ny vidiny avelao ny vinavinanao hanapa-kevitra ny sandany mitondra ianao. Rehefa manasonia mpanjifa amin'ny 10 heny amin'ny haben'ny fifanarahana mpanjifa hafa izahay dia tsy manisa azy io amin'ny fiasana im-polo heny. Isika dia manisa azy amin'ny fiezahana hahatratra 10 heny ny valiny, na hahazo valiny mitovy amin'izany amin'ny ampahafolon'ny fotoana.
Mitandrema amin'ny fomba marketing sy varotrao rehefa miresaka sanda mifanohitra amin'ny vidiny. Tsy mitovy izy ireo! Ny vidiny dia ohatrinona no andoavanao vola, ny sandanao dia ohatrinona no laninao amin'ny mpanjifa. Ny varotrao dia tokony hampiroborobo ny sanda entinao fa tsy ny vidinao. Ary raha mitaraina aminao ny ekipan'ny varotrao fa very ny varotra mifototra amin'ny vidiny dia mitadiava mpivarotra vaovao. Midika izany fa tsy azon'izy ireo ary tsy ampian'izy ireo hahalala ny sanda entinao izy ireo.
Sidenote: Amin'ity fotoanan'ny krizy ity dia ampiako hoe ny rafitra miasa dia manana an'io olana io ihany. Matetika ny olona dia manantena fiakarana miankina amin'ny azy ireo ezaka amin'ny asa, fari-piainana, na fanovana ny vidim-piainana. Izany no tombam-bidin'izy ireo hitany. Tsy misy na inona na inona amin'ireo orinasa ireo. Miorina amin'ireo, ny sasany dia manitatra ny lanjan'izy ireo… ary maro hafa no manambany azy. Amin'ny asako manontolo (ivelan'ny tafika an-dranomasina), manao ny marina aho na oviana na oviana nolavina hitadiavana vola. Satria tsy niteny COLA na fenitra indostrialy, Niresaka momba ny valiny sy tombom-barotra. Tsy misy dikany ho an'ny orinasa ny manome ahy vola 20% raha nitahiry azy ireo aho na nanao azy roa heny noho izany.
Oct 19, 2011 amin'ny 11: 12 AM
Tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho. Herintaona sy tapany lasa izay no nahitako ny bokin'i Alan Weiss maro izay nahatonga ahy hahatsapa ny lesoka rehetra nataoko raha ny vidin'ny serivisiko no resahina. Araka ny nilazany tamim-pahamendrehana hoe: "Ny tena antony mahatonga ny sarany ambany amin'ny consultant dia ny fahatokisan-tena ambany". Amin'ny serivisy, tsy misy dikany * ny fivarotana fotoana, toy ny hoe nifandray tamin'ny fotoana laniana ny sanda entinay ho an'ny mpanjifa. Raha toa ka mampitovy ny vidiny sy ny lanja voarainy ny mpanjifa dia tsara ho an'ny rehetra izany rehetra izany. Tsy misy olona voafitaka. Manampy an'io fa mirona izy io hamorona fifandraisana amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny fifamatorana, satria faly ny roa tonta.
Personnaly, aleoko amin'ny fitantanana lavitra ny hoe eny amin'ny mpanjifa fa tsy ny tsia…
Torohevitra henjana, Jacques!
Marina tokoa - tena nifanaraka tamiko ny hevitrao rehefa mianatra lesona mitovy amin'ny nataonao aho, ary amin'ny fomba mitovy. Tsy zavatra ratsy raha toa ny fanarahana ny dianao dia mametraka ahy amin'ny tongotra mitovy amin'ny anao taona vitsivitsy eny an-dàlana! Misaotra tamin'ny lahatsoratra tena manazava.